NLD International Network က စီစဉ်သော မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၇၆) နှစ်မြောက် မွေးနေ့နှင့် ဖမ်းဆီးခံပြည်သူများ လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲသို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းက ပေးပို့သော မွေးနေ့ဆုတောင်းစကား
Like – 11K Share – 1006
Very good programme. Need regular authenic news to counteract junta’s purposeful propaganda and fake news.
May May Su says:
2021-06-19 at 9:36 PM
အမေ စိတ်ကြံတိုင်း တောင်းတတိုင်အမြန်ပြည့်ပါစေအမေ
Sein Aoe Si says:
2021-06-19 at 10:18 PM
Thri Khin says:
2021-06-20 at 12:02 AM
2021-06-20 at 8:34 AM
ေမစု က်န္းမာပါေစ ေမြးေန႔ မွာ လိုတရပါေစ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကင္းစြာအျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ပါေစ ေမေမ 🙏🙏🙏🙏🙏
ၼၢင်း ၼၢင်း says:
2021-06-20 at 9:06 AM
Hladaw Lay says:
2021-06-20 at 9:49 AM
အ​မေစုနှင့်အတူ မတရားဖမ်းစီးခံရသူများအားလုံး အမြန်လွတ်​မြောက်ပါ​စေ
2021-06-20 at 10:52 AM
2021-06-20 at 1:07 PM
Sai Tunsar says:
2021-06-20 at 1:56 PM
2021-06-20 at 2:33 PM
Moe Tz says:
2021-06-20 at 6:14 PM
က်န္းမာပါ​ေစ။ ​ေဘးရန္ကင္းပါ​ေစ ။
ႏုိင္ငံဝန္ကုိ ခႏၶာဝန္ကုိ လြယ္ကူစြာ၊